Waa maxay ceshanoyinku: qiimayaasha iyo sida loo xisaabiyo maalintaada maalinlaha ah | Dhaqaalaha
Encarni Arcoya | 30/05/2021 12:14 | La cusbooneysiiyay 30/05/2021 12:18 | Dhaqaalaha guud
Mid ka mid ah fikradaha inta badan saamaynta ku leh maalinba maalinta ka dambaysa waa haynta. Kuwaas waxaa looyaqaanaa qaddarrooyinka uu canshuur bixiyuhu ka gooyo si loogu geliyo iyaga horusocod ku ah canshuuraha ay tahay in la bixiyo. Laakiin, Waa maxay xayiraaduhu? Waxaa jira noocyo badan?
Marka xigta waxaan dooneynaa inaan kaala hadalno fikradda ka haynta, noocyada jira iyo waxyaabo gaar ah oo ay tahay inaad tixgeliso fikraddan.
1 Waa maxay haynta
2 Muhiimadda haynta
3 Sidee Loo Xisaabiyaa Xisaabaadka
4 Goorma ayey codsadaan
5 Noocyada haynta
5.2 Xifdinta xirfadeed
Haddii aan ku tiirsanaano Hay'adda Canshuuraha, waxay qeexaysaa haynta sida "Lacagaha laga jaro cashuur bixiyeha ee bixiyaha dakhli cayiman, sida sharcigu dhigayo, in lagu qoro Maamulka Canshuuraha" hormar "cashuurta uu bixinayo cashuur bixiyuhu."
Ceymiska waa in loo fahmo sida soo rogida maamulka maxkamada maamulka oo hakin kara xaddi dakhli ama dakhli qof si loo bixiyo horumarka canshuuraha ee, mustaqbalka (gaagaaban, dhexdhexaad ama muddada dheer) waa inaad bixisaa .
Tusaale ahaan, ka fikir in aad iskaa u shaqeysato iyo in aad qaansheeg u dirto macmiil. Tani ma qaadi doonto VAT oo keliya, laakiin sidoo kale waa laga jari doonaa canshuurta dakhliga shaqsiga. Qadarkaas laga jaray ayaa ah kan Gobolka loo soo galay si hordhac ah waxa, rubucii, la bixinayo (sidaa darteedna marka wakhtigu yimaado, waa inay ka jarto lacagtaas hore loo bixiyay).
Si kale haddii loo dhigo, Waxaan ka hadleynaa qaddar cayiman oo laga reebay mushahar, qaansheeg ama ugu dambeyntii, aragti dhaqaale oo ujeedadeedu tahay bixinta qeyb ka mid ah canshuurta in waqti go'an, waa inaad bixisaa.
Dad badan iyo xirfadlayaal badan ayaa ka warqaba inay ku qasban yihiin inay diidaan qaansheegtooda sidaas darteedna, ma helayaan qadarka lacagta ee la filayo, laakiin aad uga yar. Laakiin runtu waxay tahay inay muhiim tahay in laqabto xayiraad dhawr sababood awgood:
Sababtoo ah waxay iska ilaaliyaan khiyaanada cashuuraha. Adiga oo horay u bixinaya qeyb ka mid ah canshuuraha, Gobolka wuxuu hubinayaa in qofkaas uu xereeyo canshuuraha, haddii kale ay ku waayi karaan lacag. Tusaale ahaan, ka soo qaad in aad qaansheegatay oo aad bixinayso 100 euro. Laakiin horey waxaad u bixisay 200 euro oo canshuur bixin ah. Hagaag, hadaadan soo bandhigin, kuwa 100 euro ee faraqa ah waad waayi doontaa.
Maxaa yeelay waxay hagaajineysaa xisaabtanka Gobolka. Waa lama huraan in tan lagu xisaabtamo. Gobolka wuxuu lacag ka helaa muwaadiniintiisa taasna waxay awood u siineysaa inay bixiso si ay u fuliso ballanqaadyadeeda. Haddii ay ahayd inaad sugto inta qof kastaa bixinayo ma haysatid lacag aad ku sii wadato "ka shaqaynta" taasoo kugu qasbi doonta inaad deyn qaadatid.
Sidee Loo Xisaabiyaa Xisaabaadka
Ceymiska ayaa aad u fudud in la xisaabiyo. Markaad ogaato inta ay tahay inaad ka jarto, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad ogaato waxa saldhigu yahay, taasi waa, lacagta ay tahay inaad ku dalbato haynta.
Tusaale ahaan, ka soo qaad inaad heysato biil dhan 100 euro waana inaad ka qaaddaa canshuurta dakhliga shaqsiga. Qadarkan ay tahay inaad ka saartid waxaa qeexaya Gobolka oo caadi ahaan waa isku mid sanad kasta. Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadlaynaa 15% (waxaa jira waxyaabo ka reeban oo ku xiran kiiska, laakiin guud ahaan waa jaantuskan).
Taasi waxay ka dhigan tahay in 15% laga saarayo 100 euro. Si kale haddii loo dhigo:
15% 100 euro waa 15 euro. 100 - 15 euro waxay u dhigantaa 85 euro. Taasi waxay noqon laheyd waxa aad runtii heli laheyd maxaa yeelay 15-ka kale ee euro waa inay bixiyaan canshuur.
Goorma ayey codsadaan
Marwalba daruuri maahan in la dalbado heynta, waxaa jira kiisas iyo waxyaabo ka reeban oo muwaadiniinta iyo shirkadaha ay uga takhalusi karaan iyaga (in kasta oo hadhow ay tilmaamayso inay bixin doonaan canshuuro dheeraad ah).
Guud ahaan, waa inaad dalbataa heynta marka:
Bixinta ayaa ku xiran sida.
Lacag bixinta ayaa ka badatay qadarka ama saldhiga ku xiran.
Kan bixiyaa waa wakiilka haynta, yacni, qof iskiis u shaqeysta ama shirkad ay tahay inay mas'uul ka noqoto soo gelitaanka canshuurahaaga. Tani waxay si gaar ah u khuseysaa xirfadleyda ka diiwaangashan qaybaha labaad iyo saddexaad ee IAE (Canshuuraha Hawlaha Dhaqaalaha).
Ka-faa'iideystaha wuxuu ku xiran yahay haynta (sida caadiga ah, markii aad qaan-sheegasho shirkadeed).
Markaad heysato wax, waxaa jira noocyo badan oo ay tahay inaad ogaato si aad si sax ah ugu dabaqi karto. Waana in boqolleyda iyo dakhliga ay saameeyeen dib u habeynta labadaba lagu dejiyay sharci.
Guud ahaan, reebista ugu badan waa:
Qof kasta oo guri kiro leh waa inuu sameeyaa a ku haynta qaansheegta, ilaa iyo inta qofka kiraystay uu fulinayo waxqabad dhaqaale. Haddii aysan sidaas yeelin, waa lagama maarmaan in la arko haddii aysan runti haynin ama haddii ay jiraan kiisas gaar ah.
Ay fuliyaan xirfadlayaal, waa midka taas Waxaa lagu sameeyaa qaansheegadka ay soo saaraan si ay ugu ururiyaan wax soo saarkooda iyo / ama adeegyadooda. Tani waxay lamid tahay tii hore loo sharaxay, taas oo boqolkiiba saldhiga laga jaro wadarta. Sidan oo kale, waa inay ku bixiyaan Khasnadda saddexdii biloodba mar iyadoo la tixgelinayo wixii ay horeba ugu bixiyeen qaansheegad kasta.
Mushaharka. Mushaarooyinka laftoodu waxay wataan qayb laga reebay in lagu bixiyo Khasnadda. Tani waa qaddarka laga reebay mushaharka si loo shaqeeyuhu ugu bixiyo akownka shaqaalaha. Marka la diyaarinayo mushahar bixinta, mushaharka guud waxaa lagu xisaabtamayaa, taas oo ah, lacagta la helay ka hor inta aan la hayn iyo cidda laga reebay qaddarka lagu shubayo Khasnadda.
Saami qaybsiga Haddii aad leedahay saami qaybsi, waa inaad ogaataa inaad adiguna xajisto. Waxaa lagu fuliyaa damaanadaha iyo dhismaha.
Dhaqaale ahaan, dhigaal iyo damaanad qaadasho go'an. Ama alaabooyinka la midka ah iyo in, sharci ahaan, ay sidoo kale ku dhici doonaan taas oo ay qasab tahay in la haysto qadar.
Canshuurta Lagu Kordhiyay Tani waa tan ugu wanaagsan ee la yaqaan, gaar ahaan soo gaabinta, VAT. Caadi ahaan, loo shaqeeyeyaashu way dabaqaan markay bixiyaan qiimaha sheyga ama adeegga (ama waxay ku darayaan qiimaha VAT lagu daray). Si kastaba ha noqotee, ma helaan lacagtaas oo dhan maxaa yeelay qayb ka mid ah waa in lagu shubaa Wakaaladda Canshuuraha.
Hadda oo aad wax yar ka ogaatid waxa ku saabsan heynta, waxaad awoodi doontaa inaad si fiican u fahamto xeerarka iyaga xukumaya iyo haddii aad si fiican u sameyneyso qaansheegtooyinkaaga ama haddii si fiican lagaa reebay mushaharkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Waa maxay haynta